Ubuntu MATE 17.04 ichauya neMATE 1.18 | Linux Vakapindwa muropa
Pakati pevhiki ino kuvandudzwa kweUbuntu kwakaomeswa uye pamwe nekuvhurwa kwekupedzisira Ubuntu beta. Mushure meizvozvo, mabheji ekupedzisira evhenji yepamutemo aburitswa, kusanganisira Ubuntu MATE, vhezheni iri kuramba ichizivikanwa pakati pevashandisi veUbuntu uye neyezvimwe zvekugovera.
Iyi vhezheni inounza yakawanda nhau kune yepamutemo kuravira, kusanganisira kusvika kwe MATE 1.18, yazvino vhezheni yedesktop rakakurumbira rinoyeuchidza izvo zvekare shanduro dzeGnome 2.
MATE 1.18 haina kungoburitswa kubva mumaraibhurari eGTK2 asiwo inosanganisira tsigiro yeWayland uye neyekubata skrini, chimwe chinhu chiri kuramba chichijairika pakati pemalaptop uye zvishandiso senge Raspberry Pi.
Ubuntu MATE 17.04 haizove neshanduro yePowerPC kunyangwe ichave iine 32-bit vhezheni
Pamwe naMATE 1.18, iyo desktop inounza kuvandudzwa mukushanda kweakajairika desktop desktop, kusanganisira Caja, maneja wefaira uye mashandiro eMenuLibre, iyo desktop menyu maneja. Mune iyi vhezheni zvakare MATE Dock Applet inosanganisirwa, mubatsiri mukuru wevanoda dhoko.
MATE 1.18 haisiriyo yega ruzivo iyo vhezheni yeiyo yepamutemo Ubuntu MATE 17.04 flavour ichaunza. Kunge kumwe kugovera, Ubuntu MATE inosiya iyo PowerPC kana inonziwo PPC dhizaini. A) Hongu, Ubuntu MATE 17.04 inongova neye 64-bit iso mufananidzo uye imwe 32-bit iso mufananidzo. Naizvozvi, timu yekusimudzira inotora chidimbu chebasa uye inoisa pfungwa pakuvandudza shanduro dzinonyanya kushandiswa uye dzakanyanya kurodha pasi.
Tinogona kuwana iyo beta vhezheni kuburikidza Iyi link. Uye kunyangwe isu tichigona kuishandisa pane chero komputa, chinhu chakanakisa kuita kusaishandisa pachikwata chekugadzira asi pamushini chaiwo, chimwe chinhu chinotiratidza mashandiro acho achashanda asi asingakanganise data redu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Ubuntu MATE 17.04 ichauya neMATE 1.18
Felipe Arturo Gonzalez Jaramillo akadaro
Ubuntu Mate ndakasangana nayo mune yayo Fedora vhezheni, kutaura zvazviri, ini handina kumbobvira ndajaira Gnome 3, ndinoiona ichiri yakashata, kusiyana neiyi, iyo inoyevedza uye yakarongeka.
Pindura Felipe Arturo Gonzalez Jaramillo